PHOTOS: Mnangagwa Courts White Voters Ahead of Election - allAfrica.com
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has addressed a crowd of white Zimbabweans in an attempt to rally the minority vote ahead of the July 30 election. Mnangagwa says that the era of land seizures is over, calling on white farmers to work with his government ahead of what is expected to be a tight contest with his main rival, Nelson Chamisa.
DW, 21 July 2018
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has acknowledged the disastrous results of his predecessor's "land reform" in a bid to win over white voters. Elections in the southern… Read more »
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa addresses white Zimbabweans.
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has acknowledged the disastrous results of his predecessor's land reform in a bid to win over white voters.
Mnangagwa Tells Wwhite Farmers Their Land is Safe
New Zimbabwe TV
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa told a crowd of white voters that their land wouldn't be taken away and called on them to work with his ... see more »